Ubuntu 22.04 LTS dia tsy manala ireo mpankahala, manakiana ny fanavaozana kely azy ireo | ubunlog
Misy olona mitsikera ny Ubuntu 22.04 sy Linux amin'ny ankapobeny noho ny tsy fahampian'ny fanavaozana
Efa ho iray volana izay nanipy izy ireo Ubuntu 22.04 LTS. Rehefa namoaka ilay lahatsoratra izahay, dia niresaka momba izay saika lazain'ny mpamorona rehetra taorian'ny famoahana vaovao, fa "ity no famotsorana tsara indrindra teo amin'ny tantara" mba hilazana fa tsy ho tafahoatra loatra izahay, fa hilazana fa zava-dehibe ny Jammy Jellyfish. mitsambikina mandroso. Ny fandehanana avy amin'ny GNOME 40 mankany amin'ny GNOME 42 dia efa nahazo betsaka, ary iray amin'ireo fanatsarana maro ihany izany.
Ao amin'ny Ubuntu 22.04 nihatsara be ny zava-bita Raha ny momba ny dikan-teny taloha, zavatra azontsika rehetra ankafizina ary indrindra ireo te-hametraka Ubuntu amin'ny Raspberry Pi. Ankoatra izany, azonao atao ny manova, amin'ny alàlan'ny default ary tsy mametraka na inona na inona, zavatra toy ny tontonana, izay ahafahantsika mamadika azy ho dock amin'ny tsindry roa, na ny loko accent. Fa ny marina, ary toy ny mitranga amin'ny fizarana rehetra, dia ny ankamaroan'ny fanatsarana dia ampahany amin'ny GNOME.
1 Moa ve ny Ubuntu 22.04 fanavaozana izay mamela zavatra irina?
2 Manao izany tsara kokoa ve ny Windows?
Moa ve ny Ubuntu 22.04 fanavaozana izay mamela zavatra irina?
Raha ny marina, tsy hoe mandany tontolo andro amin'ny famakiana ireo mpampiasa tsy afa-po amin'ny Ubuntu aho, ary tsy misy fampahalalam-baovao maro manafika ny jellyfish mamy, fa namaky zavatra izay nanahiran-tsaina ahy aho. Ny zavatra noeritreretiko voalohany rehefa namaky ny lahatsoratra voalohany aho, izay tsy hotanisaiko akory, dia ny lahatsoratra natao hiteraka resabe, mba hidiran'ny mpampiasa Ubuntu amin'ny lamba ary, raha maneho hevitra isika dia mahazo bebe kokoa. fitsidihana. taty aoriana aho nieritreritra Mac OS X 10.6, anarana kaody Snow Leopard, fanavaozam-baovao izay nampidirin'i Apple ny endri-javatra vaovao efa ho 0 ary, na izany aza, izany no mahazo tsikera tsara indrindra hatramin'izao. Nieritreritra an'i Snow Leopard aho nanontany ny tenako hoe: "Nitsikera an'i Apple ve izy ireo tamin'ny fanavaozana toy ny nataony tamin'ny Ubuntu 22.04?
Ary indraindray, ny mandeha haingana sy manampy betsaka dia tsy ny tsara indrindra. Indraindray ianao dia tsy maintsy manangona tariby, mametaka ny zava-drehetra, ataovy mifanaraka amin'ny zava-drehetra, ary izany no nataon'i Apple sy izay ataon'ny fizarana sy tetikasa Linux maro ankehitriny, toy ny GNOME. Navesatra ny Ubuntu teny an-dalana ho any Unity, ary nihanamaivana ny famoahana vaovao rehetra nanomboka tamin'ny 18.10. Ary ny zava-baovao nampidiriny no tena nanohina azy foana, na izay no hevitro.
Manao izany tsara kokoa ve ny Windows?
Apple dia manana ny tontolo iainany manokana feno, ary tena tsara izany, fa ny marina dia tsy maintsy mandoa izany ianao, ary mazava ho azy fa io no safidy mihidy indrindra (ary kely indrindra maimaim-poana) izay azontsika isafidianana. Amin'ny fomba tsotra sy ofisialy, azonao ampiasaina amin'ny Mac-nao ihany ny macOS anao, ary amin'izany rehetra izany dia tsy maintsy avelanao hisaraka kely ilay izy. Raha ny momba ireo zava-baovao nampidirin'ny Windows, azonao atao ve ny manakiana latsaky ny Ubuntu na Linux amin'ny ankapobeny?
Tsy ela akory izay dia navotsotr’izy ireo Windows 11, ary zavatra maro, hoy izy ireo, dia mbola tsy mandeha araka ny nantenaina. Izany hoe, namoaka rafitra fiasana misy tontonana ambany sy lohahevitra novaina izy ireo, izay tsy feno ary, ho an'ny sasany, mamonjy azy tsy ho may. Tsy maninona na tsy manana endri-javatra izy io, na tsy azo amboarina, na tsy azo apetraka amin'ny solosaina maro. Raha ny marina, tsy misy olona te-hametraka azy amin'ny ordinateran'ny asa / famokarana (na ho an'ny lalao milamina).
Fantatro fa nisy fanakianana be dia be momba ny Windows 11 ihany koa, fa tsy mihoatra ny Windows 10, ary ny antony dia bebe kokoa amin'ny fifindrana amin'ny zava-baovao noho ny zavatra hafa rehetra. Na izany aza, tsy mitsahatra mampitolagaga ahy ireo fanakianana ny Ubuntu 22.04 sy Linux amin'ny ankapobeny izay milaza fa tsy mandroso. Tsy haiko raha tsy tena mpampiasa Linux izy ireo, fa tsy mbola namaky ny fomba hanatsarany ny efa misy aho, ary toa tsy fantany fa ao amin'ny Linux dia misy zavatra maro azo isafidianana, ny safidy. tsy misy farany ary mihamaro hatrany. Ho an'ny ahy, ary momba ny Ubuntu, lazao fotsiny izany Tsy manaiky aho fa tsy ampidirina ny fiovana lehibe, na dia maro amin'izy ireo aza no tsy hita. Ary raha misy zavatra tsy tianao dia fidio izay mety aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Misy olona mitsikera ny Ubuntu 22.04 sy Linux amin'ny ankapobeny noho ny tsy fahampian'ny fanavaozana
Efa ela aho no tsy nampiasa Ubuntu, raha ny marina dia nila milina virtoaly aho hampandeha ny IRAF amin'ny MacOS ho an'ny mpanjifa ary nisafidy ny safidy 16.04 LTS alohan'ny Ubuntu farany, noho ny antony "fahamarinana", mieritreritra rafitra voaporofo kokoa. fa tsy mila fanavaozana be dia be. Saingy androany ny lahatsoratrao dia mahatonga ahy te-hijery azy, heveriko fa marina fa ny dikan-teny LTS dia tsy mijaly amin'ny fiovana lehibe amin'ny ankapobeny ary mitady fitoniana, ary mifanohitra amin'ny fanehoan-kevitra natao, heveriko fa mety hanome fahatokisana bebe kokoa ny mpampiasa izany, « rafitra marin-toerana kokoa» Heveriko fa mety tsara (efa manana ny dikan-teny teo aloha rehetra izy ireo mba hitsapana izay tadiaviny), mila manambatra izy ireo. Raha izaho manokana anefa, ny fahitana ny isan'ny fonosana ho SNAP ankehitriny dia mampihemotra ahy (angamba tsy mendrika ny mahita MacOS DMG)
Androany raha tsy maintsy manolotra fizarana aho dia mieritreritra ny Linux MX aloha (mifototra mivantana amin'ny Debian), fototra ho an'ireo mitady endrika tsara (ary ankehitriny angamba mieritreritra ny dikan-teny mifototra amin'ity 22.04 LTS ity), OpenSUSE, Rocky Linux ( Folk of CentOS) sy Fedpra ho an'ireo ao amin'ny tontolon'ny mpizara (Heveriko koa fa afaka mampiasa RHEL ianao raha mandoa ny fanohanana, ahitsio aho raha tsy izany), ary angamba Ubuntu aorian'ny famerenanao ary jereo (hanontany ahy hoe ahoana no hahatongavan'io PopOS io. izay tsy haiko koa fa efa hitako be resaka??)
Valiny tamin'i Khourt
Isan’ny lasibatry ny fanakianana hatrany ny Ubuntu, saingy efa nianatra nanilika azy isika izay mpampiasa azy. Tsy manaiky aho fa ny famoahana tsirairay dia tsy maintsy feno zava-baovao sy fanavaozana, aleoko fa isaky ny famoahana ny rafitra dia manatsara ny fampiasana, ny fampisehoana ary ny fahamendrehana ho an'ireo izay misafidy ny hiasa miaraka aminy. Miaraka amin'ny LTS vaovao tsirairay dia mihatsara ny Ubuntu ary ny tokony hodinihina dia tsy fizarana ho an'ny loharanon-karena ambany izy io, fa ny Lubuntu sy Xubuntu dia ary miasa tsara izy ireo, fa ny mifanohitra amin'izany dia ny Ubuntu dia ho an'ny milina matanjaka kokoa. Mpampiasa mahazatra aho, mampiasa Ubuntu 20.04 ary hijanona amin'izany aho satria manana rafitra fiasana namboarina ho an'ny tiako aho ary miasa tsara aho. Miala tsiny amin'ny halavan'ny hafatra ary misaotra anao namela ahy haneho hevitra.
Ny hany fantatro dia ho an'ny windows dia tsy miverina na mamatotra aho, ary avelao izy ireo hitsikera na inona na inona fa ny ho avy dia linux.
Valiny amin'ny mpiasa
JOSEFA dia hoy izy:
Ny marina dia ny zava-misy dia efa nipoitra nandritra ny fotoana ela momba an'i Ubuntu izay toa toy ny onjan'ny fanakianana tsy mitombina indraindray.
Ny tsy tafiditra ao an-dohako dia ny fomba nahatongavan'ny ekipan'ny UBUNTU hevitra hametraka navigateur SNAP ao anatin'ny zava-drehetra miavaka amin'ny version 22.04.
Tsy haiko hoe ahoana no tsy fahafantaran'izy ireo ny sary ratsy na ny fiheverana ratsy mety ho azon'ny olona miditra amin'ity distro ity.
Ny baotin'ny Firefox voalohany dia mampalahelo na dia amin'ny PC misy SSD aza.
Izany no tsy mety.
Valiny i Josefa
John Druimeanach A. dia hoy izy:
Salama. Tena tsara ary ahitsio ny fisaintsainanao. Jereo, nanidina avy tao Ubuntu nankany Linux Mint aho ary ny marina dia tao anatin'ireo telo taona ireo dia tsy nanana olana aho. Raha misy milaza fa tsy manavao ny Linux, dia tsara raha tsy manana fanohanana ara-bola (eny, eny, fa tsy dia betsaka) toy ny win na mac ny Linux.
Na izany na tsy izany. Amin'ny 22.04 dia manandrana Ubuntu Cinnamon aho ary tsy nanana olana hatreto. Ary toa tsara tarehy.
Tsy azoko hazavaina izany, manana hery be dia be izy io, ny Gnome amin'izao fotoana izao dia mampitebiteby ahy. Toy ny hoe rehefa mametraka Debian (Debian malalako) ianao ary mi-boot dia toa tsy vita ny Gnome, tsy maintsy misintona rakitra fanitarana gnome be dia be ianao hamela azy miaraka amin'ny traikefa mpampiasa tsara kokoa. Izany! Gnome dia tsy manolotra traikefa mpampiasa tsara kokoa. Satria toy izany ihany no karazana ratsy, ny kisary, ny varavarankely, sns. Tiako kokoa ny kanelina. Ary ankehitriny aho dia mampiasa Ubuntu Cinnamon 22.04, izay tsy tsiro ofisialy an'ny Ubuntu. Momba ny win 11 dia tsy hiresaka aho. Araka ny voalazanao, ny mac sy ny win dia mifamadika shit ary ny mpampiasa dia tsy maintsy manaiky sy miandry ny patch mba "hanatsarana" ny OS.
Valiny an'i John Druimeanach A.
Maniry mafy ny hametraka Ubuntu amin'ny PC-ko ary tsy mora amiko mihitsy izany. Tsy afaka nametraka azy mihitsy aho...
Efa 3 taona mahery no nampiasa ubuntu aho... ary tiako ny mametraka azy ho roller...
Ny marina dia tsy nampiasa Ubuntu nandritra ny fotoana kelikely aho (heveriko fa nanomboka tamin'ny version 18.04) satria nanana olana tamin'ny ordinaterako aho, tena mandeha tsara ny 22.04 ary amin'ny maha Arzantina mahay ahy dia mbola tsy afaka nanova ny solosainako aho.
Ny marina dia ny manakiana na vendrana na tsia, tsy miafara amin'ny fanampiana mihitsy, indrindra rehefa tsy refesina amin'ny tohatra mitovy ny OS malaza indrindra.
Canonical dia maka olona ho an'ny ekipa antsoina hoe "Ubuntu Gaming Experience", izay mikendry ny hanatsara ny traikefa amin'ny lalao amin'ny Ubuntu.
NetworkManager 1.38.0 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony